Lahatsary: Onjampeo An’ireo Vondrom-piarahamonina, Mameno Ny Banga Amin’ny Tsy fahampian’ny Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 8:27 GMT
radio an'ny http://www.flickr.com/photos/roycostello/
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2009)
Ao anatin'ny tena fanatontoloana sy efa mandroso amin'ny informatika, indraindray, mety adinon-tsika fa any amin'ireo faritra marobe eto ambonin'ny tany, na ny jiro aza tsy misy ho ampiasaina, ary ny fahafahana manpiasa aterineto ho toy ny loharanom-baovao dia mbola nofinofy lavitra. Any amin'ireo toerana toa an'i Goatemalà, Tchad ary India, dia ireo onjampeon'ny vondrom-piarahamonina irery ihany no hany fomba tokana ho an'ireo vondrom-piarahamonina mba hiresahana ny olan'izy ireo, hihainoana ireo aovao sy ireo tantara ary handraisana izay zava_miseho, ary ireo rehetra ireo dia amin'ny fitenin-drenin'izy ireo.
Ao Goatemalà, nanome fitaovana hananganana onjam-peonà vondrom-piarahamonina tao amin'ny CUC, Komity Fampiraisana an'ireo Tambanivohitra [amin'ny fiteny espanola] i Proyecto Suri [amin'ny fiteny espanola] mba mba hahafahan-dry zareo hanofanana ireo mpikambana samihafa ao anatin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana, amin'ireo teknika famokarana fandaharana amin'ny radio, mamaly manokana ny filàn-dry zareo amin'ny resaka filazam-baovao. Ao anatinà firenena iray izay ahitana teny velona 54 [amin'ny fiteny anglisy] mifanerasera, amin'ireo faritra sasantsasany, tsy ampiasaina ny espanola, fiteny ofisialy ao Goatemalà, na raha toa ampiasaina dia heverina ho toy ny fiteny faharoa. Faritan'ny Proyecto Suri ny fomba ataon'ireo onjampeon'ny vondrom-piarahamonina mba hitazonana ho velona ireo fiteny ireo [amin'ny fiteny espanola]:
Desde 1997 que el Concejo lucha por el derecho de las comunidades indígenas de comunicarse en su propios idiomas y a traves de sus propios medios de comunicación. Es por esto que en Guatemala las radios comunitarias cumplen uno de los roles mas importantes para lograr la recuperación de nuestras culturas originarias.
Hatramin'ny 1997, miady ho an'ny zon'ireo vondrom-piarahamonina indizena ilay Kaomisiôna mba hahafahany haneho hevitra amin'ny fitenin'izy ireo sy miaraka amin'ireo fitaovam-pifandraisany. Izany indrindra no nahatonga ireo onjampeon'ny vondrom-piarahamonina hitàna andraikitra tena manan-danja mikasika ny fakàna indray ireo kolontsainay tany am-boalohany.
Ny lahatsary manaraka [amin'ny fiteny espanola] dia nakarin'ny ProyectoSuri. Manazava ny asan'ny CUC sy ireo ezaka vitan'ny onjampeon'ny vondrom-piarahamonina izy io:
Ao Tchad, eo andalam-pamitàna ny iraka tontosainy amin'ny famoronana andiana onjampeon'ireo vondrom-piarahamonina any amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana ny Internews [amin'ny fiteny anglisy], miainga avy amin'ny tsy misy : avy amin'ny fandrafetana ireo foibe mankamin'ny fananganana ireo andry sy amin'ny fanofanana ireo mpiasa, tsongaina avy amin'ireo mpanao gazety mpitsoa-ponenana avy any Tchad sy Sodàna, mba hamokatra ireo fandaharana sy ireo fanadihadiana mikasika ireo lohahevitra toy ny olan'ireo vehivavy, ny fanampiana amin'ny maha-olona ary koa ireo vaovao mahaliana an'ireo rehetra izay mihevitra ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ho toy ny toeram-ponenany. Asehon'ny lahatsary manaraka [amin'ny fiteny anglisy] iray ny fihatsaràn'ny kalitaon'ny fiainanan'ireo izay tafiditra ao anatin'ilay tetikasa, sy ho an'ireo mpihaino.
Ao India, Ny Feonay (Namma Dhwani) no fikambanana izay nandalo ireo sakana sy nahita ny fomba hiantohana fa ho tonga any amin'ireo olona kendreny ny onjampeon'izy ireo. Toy izao ny tetikadin'ny onjampeo Namma Dhwani:
Valo no fitambaran'ireo mpiasan'ny vondrom-piarahamonina manao izay hampandeha ny foibe famokarana feo ho an'ny Namma Dhwani. Mamokatra tsy tapaka izy ireo ary manao “fanapariahana ho an'ny manodidina” (”Narrowcast”) an'ireo fandaharana misy tombontsoa iraisana mahkasika lohahevitra isan-karazany, miainga amin'ny fambolena voajanahary mankamin'ny fanatazana ireo ranon'orana, amin'ny VIH/SIDA, amin'ny fitarihan-drano mandeha mitsitaitaika ary lohahevitra maro hafa mikasika ny fampiroboroboana eo an-toerana. Namorona ny teny hoe “Narrowcast” ireo mpanoratra, mifanhitra amin'ny “broadcast” (matoanteny anglisy midika hoe mandefa) mba hilazàna fa hatramin'izao, raràn'ireo tomponandraikitra ny fanomezan-dalana azy ireo handefa malalaka ireo fandaharany. Noho ny tsy fisian'io fanomezan-dalana io, namolavola fomba iray ireo tomponandraikitra, izay hahafahan'ireo vondrona voakasik'izany isaky ny tanàna milalao ireo rakipeo ‘cassettes’.
Isaky ny Talata hariva, mandritra ny ora iray eo ho eo, alefan'ireo fanamafisam-peo ny fandaharana Namma Dhwani, izay anisan'ireo fitaovana napetraky ny santhe/mandi (tsena)-n'ny tanàna napetraka eo ankilan'ny foibe famokarana. Atolotra ao anatin'ireo “narrowcast” avokoa ny vaovao mikasika ireo entana amidy sy ny vidin'ireo vokatra avy amin'ny fambolena, ary koa ireo hafatra manana endrika sosialy, eny fa na ireo fiarahabana noho ny tsingerintaona nahaterahana aza.
Ny lahatsary, izay novokarin-dry zareo ihany koa, dia mampiseho amintsika ny fomba fametrahana ny fandaminana ireo fandaharana sy ny fomba isintonan'ny vondrom-piarahamonina tombontsoa avy amin'ireo ezaka ireo.
Goatemalà 5 andro izay
Meksika 1 herinandro izay